ဤသည်ကြီးမားသော fryer လေကြောင်း6ပိုင့လျော့နည်းထက်ဝက်ကျော်မော်ဒယ်များများအတွက်ရောင်းချမှုအပေါ်ဖြစ်ပါသည် - ပေးဖို့ BBG - Tele RELAY တစ်ခု
မူလစာမျက်နှာ » အပေးအယူ "ဒါကကြီးမားတဲ့ fryer လေကြောင်း6ပိုင့တစ်ဝက်မော်ဒယ်များထက်လျော့နည်းများအတွက်ရောင်းချမှုအပေါ်ဖြစ်ပါသည် - ပေးဖို့ BBG
100 အမေရိကန်ဒေါ်လာ fryer အတွက် OMORC6ရပ်ကွက် 1800W Air လေကြောင်းလိုင်း ရှိပြီးသား omor အဖြစ်အများအပြား features တွေနှင့်အတူဤအရွယ်အစားမော်ဒယ်များများသောအားဖြင့်အမေရိကန်ဒေါ်လာ 150 န်းကျင်ကုန်ကျဆိုတဲ့အချက်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားတဲ့အကြီးအတန်ဖိုးကိုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာယူနီဖောင်းအပူဖြန့်ဖြူးသေချာတဲ့အာဏာတွေအများကြီး, ခုနစျပါးကွဲပြားခြားနားသောချက်ပြုတ်ရလာဒ်ကဒိနှင့်ထိပ်တန်းဒီဇိုင်းရှိပါတယ်။ 100 $ ကောင်းတစ်ဦးစျေးနှုန်းဖြစ်သော်လည်းသင်လက်လီပေးဆောင်ချင်ဘယ်တော့မှလည်းမှန်သည်။ ယခုအမေဇုံသွားရောက်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်သင်သာ $ 60,51 များအတွက်ရောင်းချခြင်းပေါ်မှာဤအလွန်ကောင်းမွန်တဲ့မော်ဒယ်ကိုရှာဖွေမည်!
【62-8 လေးပုံတပုံက space OMORC6လှည်း nonstick QT လေကြောင်း fryer Air ကိုတစ်စတုရန်းပုံစံဒီဇိုင်းရှိပါတယ်ကျယ်စေရန် PERSON သည် FOR ။ ဒါဟာတစ်ဖွဲ့လုံးကြက်သား56 lb. lb. ကိုင်ထားနိုင်ပါတယ် ဒီ format နဲ့6ပိုင့်ကိုဝယ်အိမ်မှာပင်သေးငယ်တဲ့ပါတီ, လူ2အနည်းဆုံး 8 ဆောင်ရွက်ပါသည်။
, G & လကျဆောငျကျန်းမာရေးအစီအစဉ်ကျန်းမာရေး Fryer OMORC6Qt Air ကို crunchy ကြော်အစားအစာများကိုကြော်၏ရိုးရာနည်းလမ်းများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကရေနံ 85% လျော့ချ Delicious အတူတူအရသာပူဇော်နိုင်ပါတယ်။ ကြော်စားအစားအစာကိုချစ်တဲ့သူမိဘများနှင့်အဘိုးအဘွားများအတွက်, ဒါပေမယ့်လည်းကိုယ်အလေးချိန်သောသူတို့အားသင့်လျော်သော။ သင်၏မိတ်ဆွေတို့ကိုတစ်စုံလင်သောကျန်းမာလက်ဆောင်တစ်ခု။
【အဆိုပါ fryer မှဖြုတ်ခြင်းတောင်းသန့်ရှင်းပန်းကန်ဆေးစက်ဖို့လွယ်ကူလှယျကူသောသန့်ရှင်းရေးအတှကျအ non-ချောင်းကိုအပေါ်ယံပိုင်းကိုအသုံးပြုသည်။ PFOA နှင့် BPA ။ ခြင်းတောင်းအရွယ်အစား: 9,1 9,4 * * 4,5 ၌တည်၏။ ပန်းကန်ဆေးစက်ဘေးကင်းလုံခြုံ။
အသုံးပြုရလွယ်ကူ &7PRÉGLAGES Fryer OMORC Air ကိုချစ်ပ်, ဝက်သားခုတ်, ပုစွန်ကိတ်မုန့်, ကြက်သားခြေထောက်, ကင်, ငါး7ရလာဒ်ကဒိရှိပါတယ်; Pressthe "M က" ခလုတ်ကို - မီနူးရွေးရန်ဖု Turn - Pressthe "PUSH" ။ ခလုတ်ကိုလွယ်ကူစစ်ဆင်ရေးများအတွက်စုစုပေါင်းထိန်းချုပ်မှု။ မျက်မှောက်ခလုတ်ကို pushbutton ၏စဉ်ဆက်မပြတ်အထပ်ထပ်ကိုလျှော့ချနိုင်ပါတယ်။ သငျသညျ 180 400 ° F နှင့်° F ကိုအကြားအပူချိန်သတ်မှတ်ထားတယ်ဆိုရင်ဥပမာ, ရိုးရှင်းစွာအဖုအစား 22 ကြိမ်နှိပ်လှည့်။
စစ်နှစ်အာမခံ2ချက်ပြုတ်နည်းများတိုင်းမုန့်ညက်ဘို့ငါတို့လွယ်ကူသောချက်ပြုတ်နည်းများနှင့်အတူသင်အကြိုက်ဆုံးကြော်ဟင်းလျာများခံစားကြည့်ပါပါဝင်သည်။ ငါတို့သည်လည်း OMORC တစ်2နှစ်ပေါင်းအာမခံချက်နှင့်တစ်သက်တာထောက်ခံမှုကိုဆက်ကပ်။ ပွဿနာမြားပျေါပေါလျှင်ရိုးရှင်းစွာအကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုကိုဆက်သွယ်ပါ။ အာမခံ 100% ကျေနပ်မှု!
သင်တစ်ဦးသိုက် Cam ကင်မရာကိုထက်လျော့နည်းဘို့7သည်ဤလူကြိုက်များလုံခြုံရေးကင်မရာများရတစ်ခုလုံးကိုအိမ်သူအိမ်သားများဖုံးလွှမ်းနိုင်သည် - BGR
14 ၏နိုဝင်ဘာ 2019 - ဗီဒီယိုကြည့်ရှုခြင်း